चुनाव जितेपछि सिरानचोकका जनताले विकासको नयाँ लहर पाउछन् नारायणकाजीको भनाई – fukuokanepal.news | सूचना र मनोरंजन को संगालो बोकेको नेपाली समाचार साइट
गोरखा, १७ कात्तिक। गृह गाउँपालिका गोरखाको सिरानचोक पुगनुभएको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले स्थानीय बासिन्दासँग हात मिलाउँदै प्रश्न सोदनुभो ‘दाइ आराम हुनुहुन्छ ? घरतिरको खबर के छ ?’ कसैलाई काकाकाकी त कसैलाई दाइभाइको साइनोले सम्बोधन गर्दै उहाँ अंकमाल गर्दै हुनुहुन्थ्यो । आसन्न निर्वाचनमा गोरखा २ को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा बाबुराम भट्टराईको प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा चुनावी मैदानमा उत्रिनुभएको श्रेष्ठ घरदैलो अभियानअन्तर्गत् सिरानचोकको अर्कुल पुगनुभएको थियो । कार्यकर्तासहित दिउँसो दुई बजेतिर अर्कुल पुगनुभएको श्रेष्ठको गाडी रोकिएसँगै पञ्चैबाजा बज्न सुरु भयो । बाजासहित स्थानीयवासी स्वागतका लागि अगाडि सरे ।
आफ्नै ठाउँ भएर श्रेष्ठले प्रायः सबैलाई चिन्नुभयो । उहाँले त्यहाँ आफ्नो निर्वाचन सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन गरनुभयो । र, मतदातालाई सम्बोधन गर्दै भोट मागनुभयो। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘तपाईंहरु बहुमतको सरकारसँगै राजनीतिक स्थिरता र विकास चाहनुहुन्छ कि हुँदैन ? चाहनुहुन्छ भने वाम गठबन्धनलाई जिताउनुपर्छ, वाम गठबन्धनबाट मात्र त्यो सम्भव छ । सम्बोधनका क्रममा उहाँ आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी डा. भट्टराईलाई इंगित गर्दै भन्दैहुनुहुन्थ्यो ‘नयाँशक्ति नामको पुरानो विचार भएका व्यक्तिलाई जिताएर केही फाइदा छैन ।
‘दुई दिनअघि कांग्रेसलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्नुपर्छ भन्ने, अहिले त्यही काग्रेससँग मिल्ने, यस्ता मान्छेलाई कसरी विश्वास गर्नुहुन्छ,’ उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । बाबुराम भटराई सग त्यस्तो केही तिक्तता छैन । उहाँ जुन ढंगले चुनावमा आउनुभयो, त्यो उहाँको अधिकार हो । त्यसलाई हामी सम्मान गर्छाै । सम्बन्ध चिसिनुपर्ने कुनै कारण छैन । तर, उहाँ संसदमा जाने बाटो आफैंले बन्द गर्नुभयो, त्यसमा दुःख लागेको छ ।
जित त अब सुनिश्चित नै छ । यो मैले होइन, जनताले भनिराखेको कुरा हो । पहिलो कुरा त हाम्रो विचार र नीति एकदमै प्रष्ट छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, संविधानको कार्यान्वयन र विकास, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट समृद्धि हासिल गर्ने, सामाजिक न्याय हासिल गर्ने हाम्रो स्पष्ट राजनीतिक लाइन छ । लाइन मात्रै भएर हुँदैन, यसको कार्यान्वयन गर्ने हैसियत हामीसँग मात्रै छ, नारायणकाजी ले बताउनुभयो।अब वाम गठबन्धनको एकल बहुमतको सरकार बन्छ । संगठनको हिसाबले गोरखामा हामो संगठन यसै बलियो हो अर्काे अहिले गठबन्धनले झन् हामी बलियो भएका छौं । हाम्रो मनोबल बलियो छ ।
कांग्रेसका जेलनेल भोगेका, दुःख पाएका साथीहरु पनि अस्थिर प्रवृत्तिको पक्षमा देखिनुहुन्न । यस कारणले उहाँहरुको पनि समर्थन मलाई आउँछ । अनि, मेरो अहिलेसम्मको व्यक्तित्वको पहिचान पनि जितको बलियो आधार हो । मैले राष्ट्रघाती मुद्दामा कुनै सम्झौता गरिनँ, बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा उहासँग पनि गरिनँ, यो गोरखाका बासिन्दाले बुझेका छन् । म एउटा आदर्श विचार र सिद्धान्तमा अडिक रहने मान्छे हुँ भनेर सबैले बुझेका छन् । वामपन्थी एकताका लागि मैले गरेको प्रयास पनि बुझेका छन् । यस्ता कारणहरु छन्, जसले गर्दा मेरो विजयलाई कसैले पन्छाउन सक्दैन । चुनाव जितेपछि गोरखालीले नारायणकाजीबाट पहिलो कुरा त सिंगो देशले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र विकास पाउँछ । त्यसकारण यो देशको जनताले पाउने विकास यहाँका जनताले पनि पाउँछन् । दोस्रोचाहीँ गोरखा २ का मतदाताले विकासको नयाँ लहरको अनुभूति गर्न पाउनेछन् । नारायणकाजीले बताउनुभयो।